Plex.Earth waxay sawiro ka soo degtaa Google Earth Ma sharci darro baa? - Geofumadas
Janaayo, 2012 AutoCAD-AutoDesk, Google Earth / Maps
Waxaan horay u aragnay barnaamijyada qaar oo sawiro ka soo degsaday Google Earth. Gooreferenced ama maya, qaarkood hadda ka dib uma jiraan sidii StitchMaps y GoogleMaps Downloader.
Maalintii kale ayaa saaxiib i weydiiyay haddii Plex.Earth ay ka timaado AutoCAD ku xadgudubtay siyaasadaha Google ama aan.
Waa maxay shuruudaha Google?
(c) Bixinta, maamulka gaadiidka ama codsiyada la midka ah. Lama oggola in la isticmaalo Software ma jirto taas oo u oggolaanaysa isticmaalaha ama dadka kale inay galaan si aad u weyn ama qufac weyn oo ah xuduudaha laydhka iyo dhererka. Isticmaalku waa inuusan isticmaalin Software si loogu daabaco ama si aad u ballaaran sawirada, xogta ama waxyaabaha kale.
Sidoo kale shuruudaha Khariidadaha Google ayaa sheegaya:
«Ma soo saarikartid Waxyaabaha ku saabsan adeegsiga asalka ah ee aan la xiriirin badeecada, sida dib u habeyn dheeri ah oo lagu sameeyo qoraal kale, daabacaadda mashiinka, ama Codsiga GIS. "
Weydiinta waxaa lagu sameeyay goleyaal kala duwan, labadaba ESRI iyo Google Earth, laakiin isha ugu fiican ee tixraaca kiiskeena, maaddaama PlexScape uu yahay horumariye idman oo ay leedahay shirkadda AutoDesk, waa waxa isla goobta laga sheegay, kaliya markii isku xiraha uu ahaa shaybaarka. In kasta oo balooggu uusan ahayn fikradda rasmiga ah ee AutoDesk, waxay ka tagaysaa dadka isticmaala kuwa ilaaliya jahwareerka weedhaha kor ku xusan oo keliya.
Soctt Shpeppard soo celiyay laakiin sheegay in qayb ka mid sharci ah sharxi lahaa, kaas oo xusay shirkadda heshiis la Google si ay u hirgeliyaan horumarinta on API ee Google Earth oo ay ku jiraan waxa Civil3D iyo AutoCAD Map ka dhigaysa galinta model ah digital iyo images.
Autodesk waxay leedahay ruqsad Google kaasi oo u ogolaanaya Autodesk inuu hirgaliyo API-ga Google Earth oo leh qalabka Autodesk; Si kastaba ha ahaatee, waxyaabaha gaarka ah ee hirgelinteena iyo shuruudaha shatiyada Autodesk ee isticmaalka tiknoolajiyadda saddexaad waa qarsoodi, mana nihin xoriyad si aan macluumaadkaas ula wadaagno macaamiisha.
Dhamaysta isticmaalayaasha raba inay isticmaalaan sawirada Google Earth ee ka baxsan alaabta Autodesk (oo ay ka mid yihiin inay ku soo jiidato codsiyada iyaga u gaar ah) waa inay kumbuyuutarkooda ka helaan layskaga gooni ah Google waxayna raacaan shuruudaha Google ee isticmaalka.
Waxa kale oo ay caddaynaysaa in waxa ugu dambeeya isticmaala ay rabaan in ay la sameeyaan alaabooyinka laga soo saaro halkaa, horeyba waa masuuliyadooda waxayna u baahan yihiin ruqsadaha tooska ah ee Google si ay u hoggaansamaan shuruudahaas.
Marka, maadaama Plex.Scape uu yahay horumar ku saabsan awoodaha AutoCAD, waxaa lagu daboolay heshiiskan. Dabcan, faa'iidada Plex.Earth waa in Civil3D aysan u adeegsan taas laakiin kaliya AutoCAD oo xitaa noqon karta LT. Sidoo kale sawirku wuxuu ku yimaadaa midabbo waxaana jira ikhtiyaar lagu doorto xallinta soo dejinta.
Sida aan ugu soo sheegnay maqaalkayga hore, tani waxay noqon doontaa mid ka mid ah qalabka ugu faa'iido badan dadka isticmaala dhexdhexaadinta Isbaanishka. Plex.Earth si toos ah ayaa looga iibsan karaa goobta PlexScape ama ganacsade AutoDesk ah. Marka laga hadlayo Latin America, waxay raadinayaan shirkado maxalli ah.
Post Previous" Hore Budhcad badeednimada, mowduuc aan dhammaanayn
Post Next Khariidado bilaash ah oo ka socda adduunka oo dhanNext »
4 Jawaabo "Plex.Earth waxay sawiro ka soo degtaa Google Earth. Ma sharci daro?"
Fede isagu wuxuu leeyahay:
Waxay tijaabiyeen SAS.Planet?
Haa, waa sharci. Hagaag, waxaa lagu fulinayaa heshiiska uu AutoDesk la galay Google.
p isagu wuxuu leeyahay:
MARKA AAN LAHAYN?